Mifidy Kandida Ho An’ny Fifidianana Filoham-pirenena Ireo Antoko Mpanohitra Any Panama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2013 11:58 GMT
[Ireo rohy rehetra dia mamily mankany aminà pejy amin'ny teny espaniola, raha tsy voamarika manokana.]
Ireo antoko politika roa tena mpifanandrina any Panama, ny Antoko Demokratika Revolisionera (PRD) [en] ary ny Antoko Panameñista [en], dia vao avy nanatontosa ireo fifidianana anatiny ary ankehitriny manana ireo kandidàny ho filoham-pirenena ho an'ny fifidianana hatao amin'ny volana May 2014.
Ny Antoko Demokratika Revolisionera, antoko politika lehibe indrindra any amin'ny firenena, no voalohany nanao ny fifidianana anatiny izay natao ny Alahady 10 Martsa lasa teo. Lany tamin'izany ny ben'ny tanàna teo aloha tao Panama, Juan Carlos Navarro, izay naneho fisaorana tao amin'ny kaontiny Twitter (@juancanavarro):
(@juancanavarro): Amin'ny anaran'ny Cuqui, ireo zanako, ary ny fianakaviako; ary amin'ny anaran'ny ekipa mpanao ny fampielezan-kevitro, ny Kaomity Nasionaly Mpanatanteraka ho an'ny PRD, ary ny antoko: MISAOTRA ! JCN
Sary nozarain'i Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) tao amin'ny Twitter
Telemetro dia manome ireo tarehimarika marina ao amin'ny vohikalany:
Araka ireo tarehimarika farany, Navarro dia nandresy tamin'ny isam-bato 163 531 tamin'ireo latsa-bato niisa 177 000 manan-kery.
Ny Antoko Panameñista dia nanatontosa ny fifidianana anatiny ny 17 Martsa ary Juan Carlos Varela, filoha lefitry ny firenena amin'izao fotoana izao, izay noraisina ho mpanohitra taorian'ny nanimbàny ny fiombonan'ny governemanta, no nandresy. Nampiasa ny kaontiny Twitter (@JC_Varela) ihany koa ity kandidà ity mba hanehoana fisaorana tamin'ireo fanohanana azony avy tamin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny antoko:
(@JC_Varela): Misaotra ireo mpitarika sy mpikambana rehetra ao amin'ny antoko Panameñista tamin'ny fanohananareo androany, ary misaotra ny vahoakan'i Panama amin'ny fitiavanareo #JuntosVamosaVencer (#HiaraHandresyIsika)
Sary nozarain'i Juan Carlos Varela (@JC_Varela) tao amin'ny Twitter
Ernesto Cedeño, mpitoraka blaogy dia nitanisa ireo lafiny tsara sy ratsin'ny kabarin'i Varela:
1. Fanomezana fanantenana ho an'ireo drafitra sosialy noho izy mikendry ny ho filoham-pirenena.
2. Fanambaràna fampiasam-bola izay hatao hampivoarana ny firenena.
3. Fanehoana ny faniriany hampivoatra ny fanabeazana ao amin'ny firenena.
4. Fikendrena ny hamolavola fepetra hanenàna ny vidim-piainana.
5. Fikasàna hampivoatra ny rafi-pitsaràna any Panama.
6. Fanambaràna fa hampanao fanaraha-maso akaiky ny fandaniam-bolam-panjakàna.
7. Fiaikena fa amin'ny maha-mpiasam-bahoaka azy dia efa nanao hadisoana izy tamin'ny fiainany teny anivon'ny ay ama-monina.
Vivian Torrijos (@VivianTorrijos), mpikatroka mafàna fo ho an'ny Antoko Demokratika Revolisionera sady vadin'ny filoham-pirenen'i Panama teo aloha, dia nilaza fa “tsara” ny kabary nataon'ny kandidàn'ny Panameñista:
(@VivianTorrijos) Tsara ny kabarin'i Juan Carlos Varela amin'ny maha-mpilatsaka hofidiana ho filoham-pirenen'i Panama azy. Manomboka ny fampielezan-kevitra amina hevitra sy tolo-kevitra izy.
Nanaraka akaiky ireo fifidianana roa ireo ny Panameana ary manantena fifaninanana avo lenta.
Nicolle Ferguson (@nicolleferguson) dia nibitsika hoe:
(@nicolleferguson) Nety avokoa ny kabary nataon'i @juancanavarro sy @JC_Varela. Amin'izao izahay te-hahafantatra ny tetika hanatontosàna ireo fanamby tanaty fampielezan-kevitra ireo.
Ary na dia mbola misy taona iray aza vao tonga ny fifidianana filoham-pirenena, efa singa manan-danja sahady ireo fanadihadiana. Ny farany indrindra nataon'i Ditcher & Neira dia mampiseho fa manana tombony kely ny kandidàn'ny Antoko Demokratika Revolisionera, Juan Carlos Navarro. Larissa Samaniego (@LarissaYSam) dia milaza ity ao amin'ny Twitter:
(@LarissaYSam) Fanadihadian'i Ditcher & Niera Martsa: 30% @juancanavarro 22% @JC_Varela ary 5% ho an'ny CD (Ankotom-Panovàna Demokratika) Miàla any ny #nuevopanama (#panamavaovao) !
Mbola miandry izay ho voafidy avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna [en] i Panama mba hazava tsara ireo safidiny ho an'ny taona 2014.